माइक्रो-टेम्पो चालकको प्रश्न- हामीले चाहिँ भात खानै नपर्ने हो र ? – Daily NpNews
तीन सातादेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक सवारी जोरविजोर मापदण्डमा चल्न थाले। तर माइक्रो र टेम्पो चल्न नपाउने भएपछि विष्णुमायाका हातखुट्टा झनै गलेका छन्। विष्णुमाया भन्छिन- ‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि त हाम्रो टेम्पो पनि चलाउन दिनु पर्ने हो नि, हामीले चाहिँ भात खानै नपर्ने हो र ? कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरे जस्तो भएन र ?